Monday April 20, 2020 - 12:03:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya waqooyiga wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 askari ay dhinteen tobanaan kalane ay dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada Talibaan weerar cagmarin ah ku beegsadeen saldhig melleteri oo kuyaal gobolka Takhar.
Jeneraal Mohamed oo ah sarkaal katirsan wasaaradda difaaca Xukuumadda Kaabuul ayaa wakaaladda wararka DPI u sheegay in boqolaal dagaalyahan ay weerareen saldhig melleteri oo kuyaal degmada Khawaaja Gaar ayna halkaas ka geysteen halaag daran.
"Dagaalyahanno aad u hubaysan oo Taliban katirsan ayaa weerar aad uxooggan ka fuliyay saldhigga ciidanka dowladda ee Khawaaja Gaar halkaasna waxay ku laayeen Askari badan oo katirsan ciidanka qaranka Afghanistan" sidaas waxaa yiri sarkaal katirsan melleteriga dowladda Afghanistan.
Jawaad Hajri oo ah Afhayeenka maamulka gobolka Takhar ayaa isna xaqiijiyay in weerar culus lagu qaaday saldhig melleteri balse ay ciidamo gurmad ah udireen goobta weerarku ka dhacay.
Guddoomiyaha gobolka Takhar oo warbaahinta lahadlay ayaa walaac ka muujiyay in xoogaga Taliban ay la wareegaan deegaanno dhowr ah oo gobolka katirsan "waxaa suuratagal ah in mandiqadda oo idil ay gacanta cadowga ku dhacdo" sidaas waxaa yiri guddomiyaha Takhar.
Horraantii bishii March 2020 ayay Taliban iyo Mareykanka heshiis xabad joojin ah ku kala saxiixdeen magaalada Dooxa heshiiskaas oo dhigayay in muddo 14 bilood ah ciidamada Americanka looga saaro Afghanistan taas bedelkeedna Taliban ay xabadda ka joojiso Mareykanka balse howlgallada jihaadiga ah ee ka dhanka ah dabadhilifyada ayaa si xowlli ah wali wadanka ugasii socda.